Trano fanamafisana ny tadivavarana mihidy amin'ny indostrian'ny orinasa mpamokatra: Topimaso
Famolavolana Limescale amin'ny fitaovana Critical eo amin'ny sehatry ny:
Lafaoro fampidiran-jiro avo / antonony / ambany
Tsindrona vy / fanariana Gravity
Manimba ny fahombiazany, ny asa ary ny fikojakojana ka miteraka fatiantoka lehibe amin'ireo Indostria ireo.
Ny fampangatsiahana amin'ny indostrian'ny fanariana dia dingana lehibe satria misy fiantraikany amin'ny taham-pamokarana sy ny fitoniana eo amin'ny masinina. Ilaina ny mangatsiaka amin'ny:
1. Fanamafisana induction amin'ny fizaran-tany (na afo arina)
2.Fanapahana ny vatan'ny lafaoro
Ny lafaoro fandrendrehana dia mampiasa lafaoro fampidirana izay mampiempo ny vy, vy vy, na varahina. Ny lafaoro misy hafanana dia takiana mba hampangatsiaka ary hisorohana ny hafanan'ny hafanana amin'ny fitaovana. Raha manelingelina ny fampangatsiahana ny fantson'ny fantsom-drano, amin'ny alàlan'ny limes, dia hanimba ny lafaoro izany. Mba hampangatsiahana tsara ny fitaovana dia laharam-pahamehana indrindra ny kalitaon'ny rano.
Loza ateraky ny limescale amin'ny indostrian'ny famokarana
Ny kalitaon'ny rano mangatsiaka tsara no zava-dehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fanariana. Izany no antony mahatonga ny rano madio ho rano mangatsiaka ho an'ny lafaoro fampidirana.
Ny rafitra mangatsiaka izay mampiasa Open Cooling Tower miaraka amin'ny mpanova hafanana lovia dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy:
Ny tilikambo fisakafoanana misokatra dia vidiny mora kokoa, miaraka amin'ny fampiasam-bola mihodina
Ny tilikambo fisakafoanana misokatra dia tsy afaka mitoka-monina limescale
Ny mpamadika hafanana lovia dia manilika tsara ny hafanana amin'ny voalohany, fa ny fahombiazana kosa dia mihena mandritra ny fotoana maromaro.
Limescale dia mora mitranga amin'ny mpanakalo hafanana karazana lovia
Tsy dia misy toerana hipetrahana miaraka amin'ny mpanova hafanana lovia
Ny limescale amin'ny exchanger hafanana dia manampy amin'ny fihenan'ny fahombiazany
Ny fanasana asidra dia miteraka fahasimbana amin'ny mpanova hafanana
Amin'ny fomba fijery maharitra, ny fahamarinan-toerana tranofiara mihamangatsiaka mihidy SPL dia avo lavitra noho ny mpamadika hafanana lovia. Noho izany, SPL dia hanolo-kevitra ny hanolo ny tilikambo Cooling type Open miaraka amin'ny tilikambo fihenan-tseranana mihidy.
Betsaka ny tombony azo amin'ny SPL Closed Circuit Cooling Tower:
1.Fampitomboana ny faritra fanaparitahana hafanana, fampihenana ny mety ho fananganana limesialy
2.Mamaritra ny filàna famerenana rano tsy tapaka mba hisorohana ny fifantohana limesale
3.Mampihena ny toe-javatra mihidy vokatry ny hafanana be loatra